Qatar Airways ayaa loo magacaabay Airline Rasmi ah FIFA Club World Cup
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa loo magacaabay Airline Rasmi ah FIFA Club World Cup
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Sports • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Iyadoo la tixraacayo Cudurka faafa ee COVID-19, Tartankan waxaa loo qabanqaabin doonaa iyadoo la raacayo tilmaamaha FIFA ee looga baahan yahay badbaadada si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada dhammaan dadka ku lugta leh tartanka.
Qatar Airways waxay ku faaneysaa inay tahay Shirkad Rasmi ah oo Shirkad Diyaaradeed iska leh FIFA Club World Cup hosted, oo martigalisay Qatar sanadkii labaad, halkaas oo iska hor imaadka horyaalada kooxaha adduunka uu ka dhici doono inta u dhexeysa 4 - 11 Febraayo 2021.
Marka la eego Covid-19 Faafida, tartanka waxaa loo abaabuli doonaa iyadoo la raacayo tilmaamaha FIFA ee looga baahan yahay badbaadada si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada dhammaan dadka ku lugta leh tartanka. Ciyaaraha City Stadium iyo Ahmad Bin Ali Stadium ayaa dhamaantood lagu wadaa inay martigeliyaan kulamada, iyadoo ay ka mid yihiin Ulsan Hyundai (AFC), Al Ahly (CAF), Tigres (CONCACAF) Palmeiras (CONMEBOL), FC Bayern München (UEFA) iyo martigeliyaha. horyaalada horyaalka Al Duhail SC (QSL), dhamaantood waxay u tartamayaan abaalmarinta ugu qiimaha badan kubada cagta kooxaha adduunka. Si loo hubiyo khibrad safar oo nabdoon oo aan xuduud lahayn, ayaa Madaarka Caalamiga ah ee Hamad kooxdu waxay siineysaa qorshe hawlgal ah oo ku saabsan imaanshaha iyo bixitaanka kooxaha.
Madaxa shirkadda Qatar Airways Group, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: "Markii aan sii xoogeysaneyno FIFA FIFA World Cup Qatar 2022 ™, waxaan ku faraxsanahay inaan ka qeyb qaadanno sida rasmiga ah ee Airline oo isu keenta kooxaha ugu sarreeya qaaradda oo dhan, halkaas oo Qatar ayaa markale noqon doonta masraxa FIFA Club World Cup Qatar 2020 ™. Anaga oo ah sharikadda wadaniga ah ee Qatar, waxaan rajeyneynaa inaan soo dhaweyno kooxaha heerka caalami ee kubada cagta kuwaasoo mideyn doona taageerayaasha daafaha dunida ka daawanaya. ”
Isku aadka tartanka ayaa ka dhacay xarunta FIFA ee magaalada Zurich, iyadoo la dejinayo jadwalka tartanka, kaasoo ka bilaaban doona garoonka Ahmad Bin Ali 4-ta Febraayo.
Marka laga soo tago inuu yahay Wada-Shaqeeyaha Rasmiga ah ee Shirkadda Diyaaradaha ee FIFA, Qoyska Kubadda Cagta ee Qatar Airways ee kooxaha adduunka ugu sarreeya waxaa ka mid ah Al Sadd SC, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, KAS Eupen iyo Paris Saint-Germain. Taageerayaashu waxay soo qaadan karaan xariiqyadii ugu dambeeyay ee kubada cagta ee kooxda heysata horyaalnimada Yurub ee FC Bayern München, markii ay u sii marayaan HIA garoonka keli ah ee FC Bayern Fan-Shop ee Bariga Dhexe. Shirkada xamuulka ee Qatar waxay leedahay iskaashi muhiim ah dhowr dhacdooyin iyo ururo isboorti oo caan ah.
In November 2020, Qatar Airways waxay soo bandhigtay diyaarad nooca Boeing 777 ah oo si gaar ah u calaamadeysan oo lagu rinjiyeeyay FIFA World Cup Qatar 2022 ™ livery, si loogu calaamadeeyo laba sano oo ka harsan inta uu tartanku bilaabmayo 21ka Nofeembar 2022. Diyaaradda nooca loo yaqaan 'bespoke', oo ay ka muuqato sumcadda FIFA World Cup Qatar 2022 ™ calaamadda ayaa gacanta ku jirtay- rinjiyeeyay si loo xuso iskaashiga shirkadda ay la leedahay FIFA. Diyaarado badan oo ka mid ah diyaaradaha Qatar Airways ayaa ka muuqan doona Koobka Adduunka ee FIFA Qatar 2022 ™ waxayna booqan doontaa dhowr meelood oo shabakadda ah.
Qatar Airways ayaa hadda ka shaqeysa in ka badan 800 oo duulimaad toddobaadle ah oo ay ku marayso in ka badan 120 meelood oo adduunka ah. Dhamaadka Maarso 2021, Qatar Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u dhisto shabakadeeda in ka badan 130 magaalo oo leh magaalooyin badan oo loogu adeego jadwal xoog leh oo maalinle ah ama ka badan.